Google I / O, chimwe chiitiko chakamiswa neCoronavirus | Linux Vakapindwa muropa
Google I / O, chimwe chiitiko chakamiswa neCoronavirus
The coronavirus (COVID19), yakonzeresa zvakare kudzimwa kwechimwe chiitiko yakakosha kunharaunda dzekuvandudza uye ndeyekuti mushure meMobile World Congress, musangano weFacebook F8 neMusangano weGame Developper Zvino chiitiko chitsva chave kuda kubviswa ndiyo 2020 edition ye musangano weGoogle I / O wekuvandudza.
Uye ndizvo izvozvo hofori yekutsvaga uye Android musiki inotsanangura kuti iwe unofanirwa kutevedzera zvirevo zvehutano kubva kuCDC (Centers for Disease Control and Prevention) uye WHO kune chero kusangana kwepanyama kunogona kuparadzira chirwere ichi.
Sezvo mukuwedzera varongi vezviitiko zvese izvi vafunga kuzvimisa uye kumirira rairo kubva kuWHO kuti vakwanise kuzvirongedza zvakare nerima girini.
Nayo Google inovimbisa kutsvaga imwe nzira kumusangano wegore rino iyo inofanirwa kuunganidza vangangoita vanhu zviuru zvishanu kuShorere Amphitheatre muCalifornia:
"Mumavhiki ari kuuya, tichaongorora dzimwe nzira dzekuvandudza Google I / O kuti inyatsobatana nenharaunda yedu yekuvandudza," yakadaro femu muchitaumo, pamwe ichinongedzera kune imwe nzira yepamhepo.
Wese munhu akachengetera chigaro cheiyi 2020 edition anowana mari yekudzoserwa kusvika Kurume 13 uye achangoerekana ave nemukana wekuwana matikiti avo eGoogle I / O 2021.
Uye ndizvo izvozvo mumusangano uyu, iyo yaifanira kunge yakaitika musi waMay 12, 13 na14, zvishamiso zvakati wandei zvaitarisirwa kuziviswa kuruzhinji.
Muchokwadi, iwo zvakare mukana weGoogle kuti uburitse maonero ayo matsva, kunyanya zvine chekuita nezvigadzirwa nemasevhisi uye nekuvandudzwa kunotevera kuri kugadzirirwa.
Tinomirira, semuenzaniso, kuvhurwa kweiyo nyowani nhanho yemafoni Google Pixel 4A uye pamwe zvakare XL. Vagadziri vacho vangangodaro vaitarisira kuziva zvishoma nezve Android 11, nezve Kugovana padhuze mune iyi kesi.
Isu tinonyatsoshamisika kuti Google ichapei zvakare maererano nehungwaru hwekunyepedzera. Saizvozvo, Google inogona kunge iine chekutaura nezveramangwana reStadia, uye hazvo nezveFuchsia.
Kuwedzera kune izvi, Google yakanzurawo musangano wayo we 'Global News Initiative', ichaitwa muna Kubvumbi muCalifornia. Microsoft, kune rumwe rutivi, yakanzura musangano wayo we'IoT in Action 'muMelbourne, Australia, uchaitwa munaKurume 9.
Kunze kweizvi, musangano wekuvandudza Facebook F8, Musangano Cisco Rarama muMelbourne, chiitiko World Tour kubva kuUS gore-based software kambani Salesforce yeSydney Tour zvakare yakanzurwa. Panguva ino, Oracle Open World Asia yakambomiswa.
Kubviswa kweGoogle I / O 2020 kunogona kukanganisa zvakanyanya kukambani iyo yakamanikidzwa, mazuva mashoma apfuura, kusiya chiitiko chayo cheCloud Next '20 icho chaifanira kunge chakaitika muna Kubvumbi muSan Francisco Pakupedzisira, Cloud Inotevera '20 ichaitika sechikamu chegumi nemana shanduro yeDigital First muna Gumiguru, kuBelgium.
Dambudziko rehutano riri kuve chimwe chezvinonyanya kunetsa zveGoogle, Zvakanaka, svondo rapfuura, mushandi weGoogle akaedzwa aine coronavirus (Covid-19) muZurich, Switzerland. Zvichakadaro, e-commerce hofori yeAmazon yaive nemushandi muSeattle uyo akaedzawo aine chirwere checoronavirus
"Hutano uye kugara zvakanaka kwevatengi veGoogle Cloud, vatinoshanda navo, vashandi, uye nharaunda yese ndiyo yedu yepamusoro." Izvo zvinorangarirwa kuti nyaya nyowani dzecoronavirus dzakasungwa kunze kweChina, nematare anodarika zviuru gumi akaonekwa kunze kweguta reWuhan. Anenge zvikamu zvese zvezviitiko zvakakanganiswa, zvakananga kana zvisina kunangana, nemirairo yehutano iyo inofanirwa kucherechedzwa pakurwisa hutachiona uhu.
Kunyangwe Google I / O iri nemwedzi yakati wandei isipo, iyo kambani yakanzwa kudiwa kwekusatora njodzi dzisiri madikanwa sezvo coronavirus kubuda kuri kuramba kuchipararira.
Naizvozvo, vatove vazivisa kune vaipinda kuti musangano uchamiswa uye matikiti akatengwa achadzoserwa pakupera kwemwedzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google I / O, chimwe chiitiko chakamiswa neCoronavirus
Raspberry Pi Imager ndiyo yepamutemo Raspberry chishandiso chekuisa mifananidzo pane ako anozivikanwa mabhodhi
Zorin OS 15.2 inosvika ichivandudza chengetedzo uye kuenderana kwehurhare